Amaal Aadan oo Soomaalida Nowey Nafta u keentay iyo Wariye Xasan Rasta oo Su’aalo ku garaacay +Video | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Amaal Aadan oo Soomaalida Nowey Nafta u keentay iyo Wariye Xasan Rasta oo Su’aalo ku garaacay +Video
Waxaanu Halkan idiinku soo Gudbinaynaa Su’aalo kulul oo la hordhigay Amaal Aadan oo ah Gabadh Soomaaliyeed oo la sheegay inay dhibaato Ba’an ku hayso Soomaalida dalka Norwey, Iyadoona sidoo kale soo Saarta Qoraalo kala duwan.
Waxaa wax laga waydiiyey arimo la xidhiidha Nacaybka ay Soomaalidu u qabaan, Dhibaatooyin laga tirsanayo, Sidoo kalana waxaa wax laga waydiiyey Siday u aragto Sooamalida Norwey oo la sheegay inay ugu Neceb yihiin Wasiirada Qaxootiga ee dalkaasi iyo iyada Amaal Aadan ?.
3 thoughts on “Amaal Aadan oo Soomaalida Nowey Nafta u keentay iyo Wariye Xasan Rasta oo Su’aalo ku garaacay +Video”
Aisha Ali Omar says:
24/11/2016 at 16:45
Waxan halkan hanbalyo iyo bugaadin ugu dirayaa lanadiina. Siibo Xasan oo ah, wariyo layaqaano. Uma Somaliyedna u shaqeeyo. Marka Wariyane waa dhax dhaxad waane in uu umadadiisa u shaqeeyo taas uu ku helaayo ajar badan. Marka Amaal fikradeda ayay ka hadashay taasne dhib malahan marka umadena siduu ilaah ka dhigo ayay noqanaysaa. Kolay Xasan uu hadlo way fiican tahay Amaalne filradeeda ay ka hadasho. Marka qofka bilaa adanka waa ay fiican tahay in uu hadlo. Sc Wr Wb
01/12/2016 at 13:35
ASC walaalayaal Gabadhaan yaan la fogeyn halaga daayo fuquuqa si wanaagsan oo bini aadanimo kujirto haloola hadlo,
Nasiixada hadal wanaagsan halgu sheego wixii khaldan oo ay qorto ilaahaybaa kula xisaabtamaya, hadii aad dooneysaan wixii ay ku khaldantahay inay fahanto hadalka kiisa wanaagsan halagula hadlo ilaahayna ka cabsano meelkasta oo aan joogno.
04/01/2017 at 14:48
asc dhamaan umadda somaliyeed waxan doonaa in aan ka hadlo wareysiga amaal adan iyo Raasto , somalida waxaan leeyahay dad xun ayaa tihiin waayo Amaal waxa ay u aragto sax iyo qalad waa in ay kahadasho. qof wax ku cadeyn karta miyaa jidha in ay soomali ugey satatay qalada.
Amaal anigu waxaan ku dhihi lahaa soomali waad kadhalatay ee wax uqabo hadii aad uqan kartid ayaga ayad wax kutahay sidaas iyo nabad gelyo iyo shaqo wacan. Gabadh soomaliyeed oo qoraa ah wey fiican tahay ee soomaliyey ka xishooda gabadha . hadii aadan wax cadaan ah ku heynina.